Category Eizo – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
By Eizo On Thursday, February 16th, 20120Comments TalkingGeorgetheGiraffe-1.3. For Android Share
Android Phone များအတွက် TalkingGeorgetheGiraffe ပါ။ Talking Tom ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကောင်လေးတွေပါ။နောက်ထပ်Talking More... By Eizo On Thursday, February 16th, 20120Comments Talking Tom For Android Share
Android phone များအတွက် Talking Tom (စကားပြောသောကြောင်ကလေး)ပါ။အဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Talking More... By Eizo On Wednesday, February 15th, 20120Comments Bluetooh+File+Transfer+(Ad-free)+4.8.0 for Android ShareShare Android Phone များအတွက် Bluetooh File Transfer ဆော့ဝဲပါ။ Android Phone အချင်းချင်း File တွေ Share တဲ့အခါမှာ ပိုပြီးလျှင်မြန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ More... By Eizo On Tuesday, February 14th, 20120Comments Gallery lock pro v1.6.5.apk ShareAndroid Phone များအတွက် Gallery lock pro v1.6.5 ပါ။ User များ မိမိတို့လျှို့ဝှက်ထားချင်တဲ့ Personal Image တွေ Video More... By Eizo On Monday, February 13th, 20120Comments Garden of Weeden v2.8.1 for Android Share
Android Phone များအတွက် သစ်ပင်စိုက်တဲ့ဂိမ်းပါ။ သစ်ပင်ကိုရေလောင်း ပိုးသတ်ဖျန်းပေးရပါမယ်။ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Garden More... By Eizo On Monday, February 13th, 20120Comments Appwall v1.0 for Android Share
Android user များအတွက် ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ applications တွေကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်ရအောင် More... Comments